हिन्दू राष्ट्र र विपीको मेलमिलाप कमल थापा र देउवाको घाँटी जोड्ने अचुक अस्त्र ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
हिन्दू राष्ट्र र विपीको मेलमिलाप कमल थापा र देउवाको घाँटी जोड्ने अचुक अस्त्र
By नेपाली कान्छा on 6:12 PM | nepali news, nepalnews, नेपाली खबर, समाचार | No comments
सिंहदरबारको कुर्सीमा आसन हुँदा होस् या सडकमा झन्डा हल्लाएर तामझामका साथ हिँड्दा कांग्रेसले राप्रपाको साथ लिएकै थियो । राप्रपाले पनि साथ दिएकै हो । सिंहदरबारमा विराजमान हुँदा मात्र होइन, देश संकटमा पर्दा पनि देउवा र कमल थापा एक ठाउँमा आउनै पर्दछ । देश जोगाउन विपी र राजाले घाँटी जोडेजस्तै देउवा र थापाको घाँटी जोडिनु पर्छ । नत्र कम्यूनिष्टको भूलमा कांग्रेस र राप्रपाको महाभुल हुनेछ ।
काबुलको मरुभूमिमा अंग्रेज सिक्कालाई लात हानेर जियाहुदिन भेषमा देश छोड्दा भारतीय स्वतन्त्र संग्रामका नायक सुवासचन्द्र बोस भावुक त थिए नै, उनी आक्रोशित पनि थिए । महात्मा गान्धीले अंग्रेजविरुद्ध सन् १९४४ तिर थालेको सत्याग्रहप्रति सुवासचन्द्र असहमत थिए । शान्तिको बिगुल फुकेर होइन कि एक लाख संख्यामा रहेका अंग्रेज सेनाविरुद्ध हतियारको लडाइँ लडेर धपाउनुपर्ने पक्षमा थिए उनी ।
गान्धी पनि सुवासचन्द्रको विचारसँग सहमत थिएनन् । सुवासचन्द्र एक दिन गान्धीकै आश्रममा पुगे । सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्ने आफ्नो विचार गान्धीसमक्ष राखे । यो विचारमा गान्धी सहमत भएनन् । मतमतान्तरण भयो । म क्रान्ति गर्छु भन्दै सुवासचन्द्र हिँड्न लागेका बेला गान्धीले भनेका थिए, ‘सुवास बाबु मेरो दिल फूलभन्दा कोमल र पत्थरभन्दा कडा छ । तिम्रो विचारसँग म सहमत हुन सक्दिनँ । तापनि, तिमी मेरो बिग्रिएका छोरा हौ । तिम्रो तरिकाबाट भारत आजद भयो भने सबैभन्दा पहिले पिठ थपथपाउन मै आउनेछु ।’
अंग्रेज शासन र गान्धीप्रति आक्रोशित हुँदै जियाहुदिनको भेषमा सुवासचन्द्र काबुलको बाटो भएर अफगानिस्तान र त्यहाँबाट जर्मनी पुगेका थिए । उनले जर्मनी र जापानमा अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्र सेना निर्माण गरे । उनको सैन्य बलले पनि भारतबाट अंग्रेज लखेट्न सकेन । दर्जनौं भोक हडताल र सत्याग्रह गर्दा पनि अंग्रेज शासक फिर्ता भएनन् । अन्ततः सत्याग्रह, सैन्य बल र सेना विद्रोहबाट भारत स्वतन्त्र भयो ।
भारतमा सन् १९४७ अघिको अंग्रेज शासनजस्तै उन्मादमा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइ सरकार छ । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादतिर उन्मुख छ । संवैधानिक निकाय, राष्ट्रियस्तरका आयोग, कूटनीतिक नियोग, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा एकपछि अर्काे गर्दै कम्युनिस्टकरण भइरहेको छ । योग्यताभन्दा सदस्यताधारीलाई भर्ना गर्नु कम्युनिस्ट सरकार सर्वसत्तावादतिर लागेका प्रमाण हुन् । यति मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि खलल पु¥याएको छ । न्यायालय र अख्तियारजस्ता संस्थालाई पार्टीको भ्रातृसंगठनका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकाय सरकारमातहत होइन, प्रधानमन्त्रीमातहत लिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको देख्दा पनि प्रतिपक्ष दल टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । कम्युनिस्टहरूको सर्वसत्तावादी वा अधिनायकवादी चरित्र रोक्न अब प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा आउनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावाद रोक्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका घाँटी जोडिनै पर्छ । प्रतिपक्ष दलका दुई शीर्ष नेताले घाँटी नजोडेसम्म कम्युनिस्टहरुको उन्मादबाट न धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्न सकिन्छ न त सर्वसत्तावादको बाटो भत्काउन नै । सर्वसत्तावादबाट देश र जनता जोगाउने पालो अब देउवा र थापाको काँधमा छ । राष्ट्रियता जोगाउन बीपीले राजासँग घाँटी जोडेजस्तै अधिनायकवादबाट देशलाई जोगाउन देउवा र थापाले कण्ठ मिलाउनै पर्छ । यो कुनै व्यक्तिविशेषको लडाइँ होइन । यो त देश जोगाउने एउटा अभियान हो, जसको नेतृत्व देउवा र थापाले गर्नुपर्छ ।
सायद यही बुझेर होला भर्खर सम्पन्न राप्रपा विस्तारित बैठकले बीपीको मेलमिलाप नीतिलाई जोड दिएको छ । कतिपय विद्वान् मित्रले बीपीलाई राप्रपाले चोरेको आरोप पनि लगाएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईजस्ता स्वार्थवादी विद्वान्हरुको मूल पनि सर्वसत्तावाद नै हो । जर्मनीमा जन्मिएका कार्ल माक्र्स र चीनमा जन्मिएका माओत्सेतुडलाई उनीहरूले आदर्श मान्न हुने, आफ्नै देशमा जन्मिएका जननेताको आदर्श राप्रपाले मान्दा चोरी हुने ? यो कस्तो बौद्धिक तर्क हो ? बौद्धिक तर्क नभई बौद्धिक दरिद्रता हो ।
डा. साबको बौद्धिकताले यति बेला बैशाखीको सहारामा बालुवाटारको सपना बोकिरहेको छ । प्रचण्डसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर उपेन्द्र यादवसँग लगनगाँठो कसेका भट्टराईलाई संसद्को सिंढीमा कांग्रेसकै भोटले पु¥याएको हो । अहिले त्यही कांग्रेसलाई म्युजियममा सजाउनुपर्छ भन्दै खिल्ली उडाउन थालेका छन् ।
जति बेला गणतन्त्रका नाममा राजतन्त्रको समूल अन्त्य भयो त्यति बेला कांग्रेस कम्युनिस्टको बुई चढेको सत्य हो । हिन्दू राज्यलाई धर्मनिरपेक्षतामा बदल्दा कांग्रेसभित्र कुनै छलफल र बहस भएन । पश्चिमाको दबाब र कम्युनिस्टको प्रभावमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । त्यसकै आडमा अहिले गुठी विधेयक ल्याएर धर्ममाथि अंकुश लगाउने प्रयत्न भइरहेको थियो । तर, नागरिकको खबरदारीले अंकुश लगाउने सिंहदरबारको सपना माइतीघरमा चक्नाचुर भएको छ । धर्म, संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने कम्युनिस्टले धक्का खाएको छ भने कांग्रेस र राप्रपालाई नजिक ल्याएको छ ।
सिंहदरबारको कुर्सीमा आसन हुँदा होस् या सडकमा झन्डा हल्लाएर तामझामका साथ हिँड्दा कांग्रेसले राप्रपाको साथ लिएकै थियो । राप्रपाले पनि साथ दिएकै थियो । झन्डा हल्लाएर सिंहदरबारमा विराजमान हुँदा मात्र होइन, देश संकटमा पर्दा पनि यी दुई एक ठाउँमा आउनै पर्दछ । नत्र इतिहासले क्षमा दिनेछैन । कम्युनिस्टका भूलमा कांग्रेस र राप्रपाको महाभूल हुनेछ ।
शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका लागि प्रतिपक्ष दल पनि शक्तिशाली हुनुपर्छ । संसद्देखि सडकसम्म प्रतिपक्षकै कब्जामा हुनुपर्छ । जबसम्म सडक र संसद् प्रतिपक्षको हुँदैन तबसम्म सरकार अधिनायकवादी भइरहन्छ । शक्तिशाली प्रतिपक्षसँग सरकार डराउँछ । नागरिक सुरक्षित हुन्छन् । संसद्मा पछिल्लो समय कांग्रेसको भूमिका सशक्त भए पनि शक्तिशाली बन्न सकेको छैन । प्रतिपक्ष भूमिकालाई शक्तिशाली बनाउने हो भने धर्म, संस्कृतिमाथि भएको आक्रमणको कडा शैलीमा विरोध गर्नुपर्छ । विरोध गर्न पनि सडकमा शक्तिशाली शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति प्रतिपक्षको कण्ठ जुटेपछि मात्रै सम्भव छ ।
प्रतिपक्षको कार्यगत एकतालाई राप्रपाले औपचारिक रूपमै हात बढाएको छ । सत्तासाझेदारीजस्तै कांग्रेसले पनि कार्यगत एकताको हात बढायो भने सडकबाट पनि सिंहदरबारलाई सतर्क बनाउन सकिन्छ । नत्र शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारलाई सराप्नुको विकल्प हामीसँग रहनेछैन । भविष्यमा पश्चित्तापभन्दा वर्तमानको कदम सही बाटो हुनेछ ।
(लेखक राप्रपा सहायक महामन्त्री हुनुहुन्छ)
▼ 2019 (16447)